musha Europe Politicians Angela Merkel Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yakakwana yezvematongerwo enyika weGermany ane zita rezita "Kasi". Our Angela Merkel Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika pane. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, hukama hwehukama, hupenyu hwehupenyu, hwechokwadi hwemhuri, mararamiro uye nezvimwe zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndomumwe wevakadzi vane simba mune zvematongerwo enyika munyika. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Angela Merkel's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Angela Dorothea Merkel akazvarwa musi we 17th waJuly 1954 kuHamburg muGermany. Akanga ari wekutanga wevana vatatu vakazvarwa naamai vake, Herlind Kasner uye kuna baba vake, Horst Kasner (mufundisi).
Angela Merkel Vabereki Horst naHerind.
Nyika yeGermany yerudzi rwakachena nePoland midzi yaiva nemwedzi mitatu chete apo baba vake vakaiswa kukereke yeLutheran kuPerleberg muEast East Germany. Somugumisiro, mhuri yose yakaenda naye kuEast Germany uye yakagara kune imwe nzvimbo yekumaruwa kuchamhembe kweBerlin.
Kukura kuEast Germany pamwe chete nemunun'una wake, Marcus Kasner nehanzvadzi, Irene Kesner, Angela aiva nehuduku hunofadza uye akabatanidzwa nepfungwa dzekuve yakanakisisa yaaigona kunge achiri muhupenyu hwake hwepakutanga. Mukuwedzera, akadzidza kutamba makadhi ake pedyo nebhokisi rake uye kwete kuuya sechinhu chinonyanya kukosha kana kuti chinonyangadza.
Angela Merkel akakurira munzvimbo yekumaruwa kuchamhembe kweBerlin panguva iyoyo East Germany.
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Angela dzidzo yekudzidzisa inosanganisira zvidzidzo zvake pane imwe nzvimbo inozivikanwa. Paaiva kuchikoro, Angela anowedzera mune zvidzidzo zvikuru masvomhu, sayenzi, nemitauro. Panguva iyo Angela aive pakati pemakore gumi nemakore, akakurudzirwa nevabereki vake kuti vave nehupfumi hwezvematongerwo enyika kuitira kuti vave nekugadzirisa unyanzvi hunodiwa mune zvematongerwe enyika.
Angela Merkel anofarira mune zvematongerwo enyika anodzokera pakati pemakore ekuyaruka.
Iko-wechidiki akateerera mazano avo uye akatsigira zvematongerwe enyika kunyange paaidzidza physics kuYunivhesiti yeLeipzig. Akaramba achienderera mberi nekudzidza kwake paCentral Institute for Physical Chemistry yeChikemy of Sciences muBerlin-Adlershof.
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Kunyange zvazvo Angela aive akaziva zvematongerwe enyika kwemazana, zvakange zviri mu1989 kuti akazobatanidzwa mune zvematongerwo enyika kuburikidza nekuwana nhengo dzezvematongerwo enyika, Democratic Awakening mushure mekuparadzwa kwemasvingo eBerlin.
Basa rekutanga munhoroondo yake yebasa neDemocratic Awakening kwaive kuburitsa mabhokisi emakomputa matsva uye kuagadzirira kuti ashandiswe kuhofisi yebato. Hazvina kutora nguva refu asati ava mutauriri webato uye akabatsira kuitazve zita rekuti Allianz für Deutschland, kana Alliance yeGerman.
Angela Merkel akashanda mutauriri weDemocratic Awakening.
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Achienda mberi, Angela akabatana neboka guru muWest Germany, Christlich Demokratische Union inonziwo Christian Democratic Union (CDU). Yaiva nekambani iyo Angela akakunda chigaro muBundestag (imba yepasi peparamende) inomiririra Stralsund-Rügen-Grimmen. Akakidzwawo nekugadzwa kwezvematongerwo enyika nekuda kweaimbova mutevedzeri uye mutungamiriri wepati, Helmet Kohl.
Angela Merkel aine chipangamazano wake uye aimbova mutungamiri webato reCDU Helmet Kohl.
Kutongwa kwezvematongerwo enyika kwakatanga kumuona ari mushumiri wevakadzi. Akazogadzwa somushumiri wezvakatipoteredza, chigaro chaakanyatsogona kuburikidza nokutarisa nyaya dzinokakavara dzakadai senhare yenyukireya.
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Kumuka Mukurumbira Nhau
1998 raive iro gore iro Angela akasarudzwa Secretary-General weCDU zvichitevera kukundwa kweHurumende yaKohl. Makore gare gare, akasarudzwa sachigaro mutsva weCDU, chiitiko chakamuita mukadzi wekutanga kutungamira bato guru rezvematongerwo enyika reGerman.
Pasina nguva mushure mekunge atanga kurwisa kwake kurwisa mutungamiri weSocial Democrats, Gerhard Schröder uye akaziviswa Chancellor weGermany, mukadzi wokutanga kutora nzvimbo yakadaro. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Angela Merkel akapika saCancellor weGerman muna2005.
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Relationship Life Facts
Angela Merkel ave akaroora kaviri sapanguva yekunyora. Tinokuudza chokwadi pamusoro pacho kufambidzana nenyaya uye upenyu hwemhuri. Kutanga, Angela haazivikanwe kuti ave nemumwe mukomana asati asangana nemurume wake wokutanga uye mudzidzi wechipikisheni, Ulrich Merkel munguva yekushandura kweRussia. Vose vakaroorana vakaroorana kwemwedzi vasati varoora mu 1977. Kubatana kwavo kwakagara kwemakore mashomanana sezvavakarambana muC1982 vasina vana.
Angela Merkel nemurume wake wekutanga Ulrich Merkel.
Achienderera mberi, Angela akaroora murume wake wechipiri Joachim Sauer uye anga anaye kubva ipapo. Kunyangwe pasina mwanakomana (s) kana mwanasikana (s) akazvarwa pahukama, Angela ndiye nhanho-amai kuvanakomana vaJoachim - Adrian naDaniel Sauer - kubva kuhukama hwepamberi hwewanano.
Angela Merkel nemurume wake wechipiri Joachim Sauer.
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Angela Merkel akaberekerwa mumhuri yepamusoro-kati yemhuri. Tinokuudza chokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve Baba vaAngela Merkel: Horst Kasner ndibaba vaAngela. Iye akazvarwa pa6th yaNyamavhuvhu 1926 uye akashanda semupurotesitendi wezvechitendero chikamu chikuru chehupenyu hwake. Kusvika parufu rwake munaGunyana 2011, Kasner aive baba vanotsigira vaitsigira zvaAngela mune zvematongerwo enyika.
Angela Merkel naBaba Horst.
Nezve Amai vaAngela Merkel: Herlind Kasner ndiamai vaAngela. Iye akazvarwa pa8th yaJuly 1928 uye akashanda semudzidzisi weChirungu neLatin. Herlind ainyanya kushamwaridzana naAngela uye akagovana hukama hwepedyo naye. Saka kufa kwake muna Kubvumbi 2019 kwaive kurasikirwa kukuru kune wezvematongerwo enyika aigona kushandisa rutsigiro rwemubereki.
Angela Merkel amai vaHerind.
Nezve Angela Merkel's Siblings: Angela Merkel ane vanin'ina vaviri vaakakurira navo kunzvimbo yekumaruwa kuchamhembe kweBerlin. Ivo vanin'ina vanosanganisira mukoma waAngela, Marcus Kesner uye hanzvadzi yake, Irene Kesner.
Marcus, akaberekwa musi we7th waJuly ndiye nyanzvi yefilosofi. Anogara muguta reGermany reDarmstadt uye anodzidzisa paIsi Institute for Theoretical Physics muGoethe University Frankfurt. Panguva iyi, zvishoma zvinonyatsozivikanwa nezvaIrene Kesner uyo anoshanda sechiremba wezvemhizha semazuva ekunyora.
Angela Merkel mukoma Marcus Kesner.
Nezve hama dzaAngela Angela Merkel: Kure nehupenyu hwemhuri hwaAngela, sekuru nasekuru vake vaive Ludwik Marian Kaźmierczak naMargarethe apo sekuru vake nasekuru naambuya vaive Willi Jentzsch naGertrud Alma zvakateerana. Zvichakadaro zvishoma zvinozivikanwa nezve babamunini naamainini vake, zvakafanana zvinopfuura nepabhodhi kune babamunini nasekuru nababamunini.
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Chii chinoita kuti Angela Merkel abike? gara kumashure apo isu tichikuunzira maitiro ehunhu hwaAngela kuti akubatsire iwe kuwana yakazara mufananidzo wake. Kutanga, Angela's persona isanganiswa yeCancer Zodiac maitiro. Iye ari wekutanga uye wekuvanda ane chinzvimbo munhu anofunga zvakadzama asati anyorera kune chero mutsara wechiito.
Uyezve, Angela ane unyanzvi pakugadzirisa nenzira dzisinganyengeri zvaanoda. Zvimwe zvinokuvaraidza zvinosanganisira kutengesa pachedu, kubheka pie uye kuverenga. Anofarirawo kufamba mumitambo uye mitambo, kunyanya yebhola.
Angela Merkel anosarudza kuzvitengera.
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Lifestyle Facts
Angela Merkel anorarama hupenyu hwekuchengetedza uye anochengeta nyaya dzehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika kwaari. Mutengo waAngela wakakomberedza $ 11.5 mamirioni sepanguva yekunyora apa mabviro ehupfumi hwake kusanganisira muhoro wake uye mashandisiro emari zvisati zvajeka.
Asi kunze kwechigaro chake chepamutemo pa Federal Federal (Bundeskanzleramt) muBerlin, Angela ane nzvimbo yega yega yeimba yeGermany. Anotasva mumasvingo akadzivirirwa seanenge panguva yekunyora apo zvishoma zvichinozivikanwa pamusoro pechiri motokari yake yekuunganidza.
Angela Merkel achibuda mumotokari yake yeAudi A8 L yakachengetedzwa.
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Kuputira Angela Merkel mwana wehupenyu nhau uye biography pano ndezvimwe zvisingatauriki kana zvishoma zvakazivikanwa izvo zvisingawanzobatanidzi muhupenyu hwayo.
Izita raAngela "Kasi" raingove rakabva pazita rake rekupedzisira Kasner.
Kunyange zvazvo Angela asingazivikanwi kuti anofarira kusvuta, ave achionekwa achida kunwa doro.
Angela Merkel haazivi kuti anosvuta asi anofara kunwa doro. Chikwereti: TDB uye The Atlantic.
Nezvechitendero chake, Angela akarererwa semuprotestant weLutheran. Iye achiri kutsigira kutenda kwake kwechiKristu uye akatsigira kuti: "Ndinotenda kuna Mwari uye chitendero ndiwo shamwari yangu nguva dzose, uye yave iri yehupenyu hwangu hwose."
Angela Merkel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Angela Merkel Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!